Faira isina malware - iyi tyisidziro ndeyei? | Linux Vakapindwa muropa
El malware iri kuramba ichiwedzera kuverengeka, uye GNU / Linux haina hutachiona zvachose kune aya marudzi etyisidziro. Muchokwadi, akawandisa macode macustoms ari kuongororwa ayo anokanganisa mashandiro aya. Naizvozvo, usaite chikanganiso chekufunga kuti isisitimu isingakuvadze uye kuti wakachengeteka chose, nekuti zvingave zvisina basa ...
Kutyisidzirwa kwekuchengetedzeka kuri kuita mutorwa uye mutorwa, uye ikozvino ndichakuratidza imwe yanga ichinetseka kwechinguva uye yaungangodaro usina kuziva nezvayo. Zvayo ndezve isina malware, ndiko kuti, mhando nyowani yekodhi yakaipa isingade mafaira ekukanganisa. Uye izvi zvakaziviswa neAT & T's Alien Labs chengetedzo yekutsvagisa nzvimbo. Uye zvakare, ivo vanoyambira kuti ma cybercriminals ari kuramba achiishandisa kurwisa michina yeLinux, kunyangwe pakutanga yanga ichishandiswa muWindows.
1 Chii chisina faira malware?
2 Iyi malware inoshanda sei?
3 Nzira yekuzvidzivirira kubva kune malware?
Chii chisina faira malware?
Kusiyana neyakajairwa malware, iyo inotora mukana wekuti mafaera anokwenenzverwa kukanganisa hutachiona, isina mafaera haitsamire pamafaera aya kuita hutachiona. Naizvozvo, inogona kuve imwe nzira yekunyepedzera yekurwisa iyo inotarisa pane yakavimbika maitiro. yakaiswa mu RAM kutora mukana wavo uye kumhanyisa yakaipa kodhi.
Rudzi rwe malware runowanzo shandiswa kunyora kana ku Sefa zvakavanzika data uye wochinjisa dzakananga kune anorwisa ari kure. Uye chinhu chakaipisisa ndechekuti ivo havasiye maratidziro pane ane hutachiona masisitimu, zvese zvinomhanya mundangariro huru pasina kudiwa kwemafaira pane hard drive iyo inogona kuwanikwa nema antimalware maturusi. Zvakare, iwe paunotangazve kana kuvhara iyo system, yese yakaipa code inonyangarika, asi kukuvara kwatoitwa ...
Rudzi urwu rwekutyisidzira rwunodaidzwa kuti AVT (Yepamberi Yekushungurudza Kutyisidzira) chaizvo nekuda kwekuti inoshanda sei.
Zvinogona kusanyanya kuomerera nekuda kwehunhu hwayo, asi zvinogona kudaro zvine ngozi pamaseva uye nezvimwe zvishandiso zvisingawanzo kuvharwa kana kudzoreredzwa, uko kwazvinogona kumhanya kwenguva yakareba.
Iyi malware inoshanda sei?
Zvakanaka, mira hutachiona system, isina malware inoita nhanho dzinoverengeka:
Sisitimu inotapukirwa ne kushandiswa kweimwe njodzi kana kukanganisa kwemushandisi. Zvingave nekuda kwekushomeka mune software yakashandiswa, phishing, nezvimwe.
Kana uchinge watapukirwa, zvinotevera ndizvo gadzirisa maitiro yeavo varikumhanya mundangariro. Kune izvo iwe unoshandisa system kufona kana syscall senge ptrace () paLinux.
Ino ndiyo nguva yekuve isa kodhi yakaipa kana malware mu RAM, pasina kukosha kwekunyorera kune hard drive. Izvi zvinoitwa nekushandisa buffer kufashukira, kunyora nzvimbo dzekurangarira padhuze neyakagadziriswa maitiro.
Kodhi yakaipa inomhanya uye inokanganisa iyo system, chero iri. Kazhinji, idzi mhando dze malware dzinotora mukana wevaturikiri vemitauro yakadai sePython, Perl, nezvimwe, kumhanya, sezvo zvakanyorwa mumitauro iyoyo.
Nzira yekuzvidzivirira kubva kune malware?
Zano rakanakisa ndere pfungwa yakajairika. Ehezve, kuve neanoshanda ekuchengetedza masystem, kuzviparadzanisa, akaomarara data backups, nezvimwe, zvinobatsira iwe kudzivirira kutyisidzira kubva mukukonzera kukuvara kukuru. Kana zviri zvekudzivirira, zvaizoitika kuti uite zvakafanana nezvimwe zvekutyisidzira:
Gadziridza iyo inoshanda sisitimu uye yaiswa software neazvino kuchengetedzeka zvigamba.
Uninstall application / services izvo zvisingadiwe.
Tarisa system matanda kazhinji uye wongorora network traffic.
Shandisa mapassword akasimba.
Usatorere kubva kune zvisina kuvimbika masosi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Sisitimu Yekutonga » Faira isina malware - iyi tyisidziro ndeyei?